अनन्त विश्वास - Blog for Lovely Helen
के हामी कहिल्यै चाहन्छु प्राप्त अप्रत्याशित रूपमा यति सजिलै हुनुपर्छ, हाम्रो मूल छैन शङ्कालु शुद्ध मन र विश्वास गर्न कसैलाई.
भनेर मनमा सक्छ सूख को डिग्री अनुसार शारीरिक ज्ञान छ । त्यसैले, सामान्यतया व्यस्त वयस्क एक यो कहिल्यै चाहन्छु पूरा मनमा पनि भने, कुनै व्यक्तिगत थियो न त दुःखी जीवन मा शिशु दिन ।
मन कहिल्यै यति हुँदा सशंकित र पनि प्यारो, कसैलाई यति गाह्रो छ प्राप्त गर्न मा एक यसपछि अनुभव छ । यदि कसैलाई कुनै पनि समय हुन्छ कि मौका मनमा कि, हुन चाहन्छु उपहार ।
तर, हामी गर्न सक्छन् भने छ, त्यसैले सानो भरोसा र प्रोत्साहन गर्न, हामीलाई सकारात्मक, जो कोहि प्राप्त गर्न सक्ने केही छ कि सक्षम छ. यो संग मनमा दैनिक हेरविचार र व्यक्तिगत ध्यान, मा प्रत्येक विशिष्ट तरिका छ ।
हामी भने विश्वास कसैको केहि मात्र मा प्रेम, हामी चाहन्छु दृष्टिकोण कोमल हुनुको मात्र परमेश्वरले हामीलाई प्रदान गर्दछ.
विश्वास मनमा बनाउँछ प्रेम, त्यसैले स्वाभाविक र आवश्यक छ, र भन्ने निश्चित बनाउँछ अर्को आनन्दको लागि हामीलाई अघि कि मन सम्पन्न भएको थियो । यो कहिल्यै एक धारणा छ, बस सत्य, तपाईंलाई थाहा छ!
पत्यार पार्र्ने मा हामीलाई मन संग सँगैको विश्वास कसैले गरेको प्रेम, त्यो प्यारो विश्वास मा विश्वास बनाउन सक्छ, हाम्रो भविष्य संग कल्पना यति सुन्दर प्रतिज्ञा गरिएको देशमा हाम्रो लागि, तपाईं देख्न!
यसको होलान् बुझे पक्ष प्रमाणित गर्नु पर्छ भनेर मात्र विश्वास हाम्रो आफ्नै मन मा साझा सकिन्छ परस्पर प्यारो टाई संग कुनै मा बुझे सुन्दरता, र के धेरै हुनुको शुद्ध मनमा हुन्छ हामीलाई भरोसायोग्य दर्शन गर्न भविष्य ।
किन म दाबी यति मात्र पर्याप्त कारण देखि अर्को प्रश्न. "के तान्नुहोस् सक्छ साँचो आनन्द बाहेक को मन मा विश्वास प्यारो मन कोहि छ सक्छ मन?”
कि मन सक्ने ढोका खोल्न प्यारो दर्शन गर्न भविष्य ।
मात्र विश्वास pधेरै हुनुको शुद्ध हामीलाई प्रदान एक आनन्दित मन ।
कहिलेकाहीं, iहामी प्रतिरोध गर्न सक्दैन हामी मा यति कडा दुःखको मन मा, तपाईंलाई थाहा छ, भनेर यति कडा मुशकिल से हामी सहन सक्छ समय हुन सक्छ हल मा भइरहेको भयभीत भावना पनि एक पल मा घेरिएको, मात्र शान्ति ।
कि बेबदल क्षण हुन सक्छ द्वारा गरे हाम्रो सानो स्वभाविक मन ।
त्यो शान्त अवधि, हामी कल्पना चाहन्छु यति धेरै कुराहरू मा मन ।
सबै यति शरारती स्वर्गदूतहरू वरिपरि उड मध्यरात आकास लागि मनाउने अर्को दिन बिहान!
तिनीहरूले थाहा केहि दुष्ट षडयंत्र मात्र इमानदार स्वर्गदूतहरू सक्छ मन मा छ.
तैपनि, हामी चाहन्छु निको हुन आफ्नो दुर्लभ मुस्कान मध्यरातमा सपना मा पनि डरलाग्दो सपना छ!
भने सारा संसारमा मा मात्र कि प्रकारको क्षण, त्यसैले सार्वभौमिक सबै कुराहरू हुन सक्छ enwrapped मा साझेदारी कुनै-पक्कै, कुनै-शंकास्पद मन कुनै र केहि.
संभवतः, को प्रकारको आगमन हुन सक्छ त्यसैले छोटा तर या त धेरै सही क्षण हो ।
त्यो त आकर्षक सौन्दर्य, हामी बिर्सन कहिल्यै हाम्रो मन गरेको सुसज्जित गर्न मन, प्रेम, सौन्दर्य, र यो गर्न पट्टी विश्वास गर्न मन कुनै र केहि. हामी चाहन्छु मनमा राख्नुहोस्, सधैंभरि!
अनन्त विश्वास उत्पन्न गर्न सक्छ मा मात्र यति आकर्षक क्षण हाम्रो आफ्नै छोएको भावना ।
कुनै, कि क्षण हुनु पर्छ आउन एक मौका.
जुलाई । 3rd. दुई हजार बीस एक
2021/07/22 11:34 Escape Road id:lovelyhelen
शाश्वत विश्वास Round Up All what You Need!